ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်းကို မြန်မာနိုင်နိုင်ငံမှာသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပါကြော်ကြားခဲ့ပြီး ပြန်လည်သီဆိုလိုက်တဲ့ ကိုရီးယားတေးသံရှင်များ – Cele Top Stars
March 11, 2021 By admin2Knowledge
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းကတော့ တေးရေး ဆရာ နိုင်မြန်မာ က အမေရိကန် ရော့ဂီတဝိုင်း “ကန်ဇာ့စ်” အဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကျော် Dust in the Wind သီချင်းသံစဉ်ကို မြန်မာစာသားသွင်းရေးသားခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များတွင် အရေးပါထင်ရှားလာခဲ့သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ရာ၌ တကျော့ပြန်ခေတ်စားလာခဲ့သော သီချင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုခါမှာတော့ကမ္ဘာမကြေဘူး ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုKorea က 안녕, 우린 라온이라고 해 ဆိုတဲ့youtube channelက ပြန်ဆိုပေးထားတာပါ။ကြက်သီးတွေ ထလာ ပြီး မျက်ရည်တွေ ပါကျရပါတယ်😭အဲ့ထဲက ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ Kwon Ji Hoဆိုတဲ့တစ်ယောက် ကလည်း Save Myanmar.I really really don’t want any more sacrifices…cheer up,all of you will be able to achieve democracy!!ဆိုပြီး မန့်ထားပေးပါေ သးတယ်။
0:18 စက္ကန့်မှာ ပါသည့် ဓာတ်ပုံသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ထောက်ခံ သည့် အဖွဲ့၏ ပုံဖြစ်ပါသည်။ကျွနုပ်တို့ တကယ့်စိတ်ရင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို အားပေးထောက်ခံရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို တိတိကျကျ ဖော်ပြလိုသည့်သဘောဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် အနည်းငယ် အဆင်မပြေမှု ရှိခဲ့ပါလျှင် နားလည်ပေးပါရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို အားပေးထောက်ခံပါသည် လို့လည်းပရိသတ်တွေအထင်မမှားအောင်ရှင်ပြပေး ထားပါတယ်။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ ကမ်ဘာမကွဘေူး သီခငျြးကတော့ တေးရေး ဆရာ နိုငျမွနျမာ က အမရေိကနျ ရော့ဂီတဝိုငျး “ကနျဇာ့ဈ” အဖှဲ့ရဲ့နာမညျကြျော Dust in the Wind သီခငျြးသံစဉျကို မွနျမာစာသားသှငျးရေးသားခဲ့ပွီးရှဈလေးလုံးအရေးတျောပုံမှ စတငျကာ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီတကျကွှလှုပျရှားမှုဖွဈစဉျမြားတှငျ အရေးပါထငျရှားလာခဲ့သညျ့ သီခငျြးတဈပုဒျပဲ ဖွဈပါတယျ။၂၀၂၁ မွနျမာနိုငျငံစဈအာဏာသိမျးခံရခွငျးဖွဈစဉျတှငျ အာဏာရှငျကိုဆနျ့ကငျြရာ၌ တကြော့ပွနျခတျေစားလာခဲ့သော သီခငျြး လညျးဖွဈပါတယျ။
အခုခါမှာတော့ကမ်ဘာမကွဘေူး ဆိုတဲ့ သီခငျြးကိုKorea က 안녕, 우린 라온이라고 해 ဆိုတဲ့youtube channelက ပွနျဆိုပေးထားတာပါ။ကွကျသီးတှေ ထလာ ပွီး မကျြရညျတှေ ပါကရြပါတယျ😭အဲ့ထဲက ဆံပငျရှညျရှညျနဲ့ Kwon Ji Hoဆိုတဲ့တဈယောကျ ကလညျး Save Myanmar.I really really don’t want any more sacrifices…cheer up,all of you will be able to achieve democracy!!ဆိုပွီး မနျ့ထားပေးပါေ သးတယျ။
0:18 စက်ကနျ့မှာ ပါသညျ့ ဓာတျပုံသညျ စဈအာဏာသိမျးမှုကို ထောကျခံ သညျ့ အဖှဲ့၏ ပုံဖွဈပါသညျ။ကြှနုပျတို့ တကယျ့စိတျရငျးဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီလှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျသူမြားကို အားပေးထောကျခံရနျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အခွအေနကေို တိတိကကြ ဖျောပွလိုသညျ့သဘောဖွငျ့ အသုံးပွုခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ ပထမ ဗီဒီယိုဖိုငျတှငျ အနညျးငယျ အဆငျမပွမှေု ရှိခဲ့ပါလြှငျ နားလညျပေးပါရနျ မြှျောလငျ့ပါသညျ။ကြှနျုပျတို့သညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီလှုပျရှားမှုကို အားပေးထောကျခံပါသညျ လို့လညျးပရိသတျတှအေထငျမမှားအောငျရှငျပွပေး ထားပါတယျ။
သိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့Andaman Gold နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ